natural OTOHA Cleansing Oil ဟာ မိတ်ကပ်ကို့ရှယ်လိမ်းတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက် မိတ်ကပ်ဖျက်နိုင်သလို အသားအရေကို ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး Skincare Series ထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူက အမွှေးနံ့သာဆီ၊ ဓာတုဗေဒ..
မိတ်ကပ်ကို ဖျက်နိုင်ယုံ တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ မျက်နှာ မွှေးညှင်းပေါက်များ အတွင်း ရှိ အညစ်အကြေးကို ဆေးကြောပေးပြီး ၊ နေလောင်ဓါဏ် ကြောင့်ဖြစ်သော တင်းတိတ် နှင့် မှဲ့ခြောက် များကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ညှင်သာစွာ သုတ..
Forming Wash 150ml
အသားအရေ ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် အသင့်တော်ဆုံး Skin Care Series , made in Japan.အမွှေးနံ့သာဆီ ၊ ဓာတုဗေဒ ပစ္စည်း ၊ ဆိုးဆေး များ လုံးဝ မပါဝင်သော natural OTOHA Foaming wash မွှေးညှင်းပေါက်များ အတွင်ထဲထိ ထိရော..
Skincare Emulsion 80ml
အသားအရေ ခြောက်သွေ့သူများ အတွက် အထူး သင့်လျှော်ပြီး အမွှေးနံသာဆီ ၊ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း ၊ ဆိုးဆေး များ လုံးဝ မပါဝင်သော Non-chemical ပစ္စည်းလေးပါ။ အချိန်တို အတွင်း ရေဓါတ် ကိုဖြည့်တင်းပေးပြီး ဝက်ခြံ ၊ တင်းတိတ်..
Skincare Lotion 150ml
အသားအရေ ထိန်းသိမ်း ဖို့အတွက် အသင့်တော်ဆုံး Skin Care Series , made in Japan.အမွှေးနံ့သာဆီ ၊ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း ၊ ဆိုးဆေး များ လုံးဝ မပါဝင်သော natural OTOHA skin caer lotion ပါ။သဘာဝ အလှကုန်ပစ္စည်းသုံး ပါဝင..
Skincare Soap - Aloe 30g
အသားအရေအတွက် အထူးသင့်လျော်သော additive-free ဆပ်ပြာ , made in Japan.လျှားဇောင်းလက်ပတ် သည် မီးလောင်ဒါဏ်ရာ တို့တွင် အသုံးပြုနိုင်သော အာဏိသင်ရှိပါသည်။နေရောင်ခြည် ကြောင့် ပျက်စီးသွားသော အသာအရေ ကိုကာကွယ်ပေး..
Skincare Soap - Aloe 90g
Skincare Soap - Honey 30g
အသားအရေအတွက် အထူးသင့်လျှော်သော additive-free ဆပ်ပြာ , made in Japan.သဘာဝ ပျားရည် စစ်စစ် ကို အခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ပျားရည်တွင်ပါဝင်သော vitamin နှင် သတ္ထုဓါတ်များ က အသားအရေခြောက်သွေ့မှု ကိုသက်သာပျေ..
Skincare Soap - Honey 90g
Skincare Soap - Lavender 30g
အသားအရေအတွက် အထူးသင့်လျော်သော additive-free ဆပ်ပြာ , made in Japan.Lavender သည် အသားအရေ ကြမ်းခြင်း ကိုသက်သာစေပြီးချောမွတ်လှပသော အသားအရေကို ရရှိစေရန် အထောက်အကူပြုပါသည်။Lavender ရနံသည် စိတ်ကို ကြည်လင်စေ..
Skincare Soap - Lavender 90g
Skincare Soap - Mint 30g
အသားအရေအတွက် အထူးသင့်လျော်သော additive-free ဆပ်ပြာ , made in Japan. Mint အရွက်သည် ခန္ဓာကိုယ်ကို အေးမြစေပြီး ၊ ချွေးထွက် သန်သူများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ရောဂါ ပိုးမွားများကို ကာကွယ်ပေးပြီး ၊ ချွေးနံ့..